A Diamond in the Rough (2019) | MM Movie Store
ဂငျဂီဂနျးဟာ အထကျတနျးကြောငျးသားတဈဦးပါ….ဒီသားလေးတဈယောကျထဲရှိတာဆိုပွီးမိခငျရဲ့ အလိုလိုကျမှုကွောငျ့ ခပျဆိုးဆိုးကောငျလေးတဈယောကျဖွဈနခေဲ့ပါတယျ…တဈရကျမှာတော့ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ အတူ ရှာမှာရှိတဲ့ အိမျတဈအိမျရဲ့ စိုကျခငျးကနကွေကျသှနျဖွူ ခိုးရောငျးမှုနဲ့ ထောငျကသြှားခဲ့ပါတယျ…..
မိခငျဖွဈသူက အိမျနောကျက မွကှေကျကိုအလြျောပေးပွီး ကအြေေးပေးလို့ ပွနျလှတျလာခဲ့ပါတယျ…..ဒီအမှုရဲ့နောကျဆကျတှဲအကြိုးဆကျက ကြောငျးထုတျခံခဲ့ရပါတယျ….ဒါ့ကောငျ့ ဂငျဂီဂနျးဟာသူ့ကိုယျသူပွငျဆငျပွီးကောငျးအောငျနမေယျဆိုပွီး ဆိုးလျ မွို့ကိုတကျသှားခဲ့ပါတယျ…..
ဆိုးလျကိုရောကျတဲ့အခြိနျမှ တကယျကံဆိုးတာပါ…. ပွဿနာအကွီးကွီးကွုံပွီးသဒေဏျပါကသြှားတယျ….ဒီလိုအခွအေနမှော တောကမိခငျဖွဈသူဟာသားလေးအမှုက ပွဈဒဏျပွလြေော့ဖို့ သူတတျစှမျးသလိုကွိုးစားပါတော့တယျ….
ဒီကားထဲက မခငျဖွဈသူအဖွဈသရုပျဆောငျထားတဲ့မငျးသမီးကွီး Hae-sook Kim ကိုတော့အားလုံးသိကွမှာပါ…သရုပျဆောငျအငျမတနျတျောတဲ့သူပါ….ဒီတဈကားလုံးလညျး သူတဈယောကျထဲထိနျးသှားတာ…သားဖွဈသူဟာ ဘယျလိုအမှုမြိုးကြူးလှနျခဲ့တာလဲ….မိခငျကွီးကလညျး သားကိုခဈြတဲ့စိတျနဲ့ ဘယျလိုတှကွေိုးစားမလဲဆိုတာကိုတော့ခံစားကွညျ့ကွပါဉီး….
ဂင်ဂီဂန်းဟာ အထက်တန်းကျောင်းသားတစ်ဦးပါ….ဒီသားလေးတစ်ယောက်ထဲရှိတာဆိုပြီးမိခင်ရဲ့ အလိုလိုက်မှုကြောင့် ခပ်ဆိုးဆိုးကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်…တစ်ရက်မှာတော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတူ ရွာမှာရှိတဲ့ အိမ်တစ်အိမ်ရဲ့ စိုက်ခင်းကနေကြက်သွန်ဖြူ ခိုးရောင်းမှုနဲ့ ထောင်ကျသွားခဲ့ပါတယ်…..
မိခင်ဖြစ်သူက အိမ်နောက်က မြေကွက်ကိုအလျော်ပေးပြီး ကျေအေးပေးလို့ ပြန်လွတ်လာခဲ့ပါတယ်…..ဒီအမှုရဲ့နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်က ကျောင်းထုတ်ခံခဲ့ရပါတယ်….ဒါ့ကောင့် ဂင်ဂီဂန်းဟာသူ့ကိုယ်သူပြင်ဆင်ပြီးကောင်းအောင်နေမယ်ဆိုပြီး ဆိုးလ် မြို့ကိုတက်သွားခဲ့ပါတယ်…..
ဆိုးလ်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှ တကယ်ကံဆိုးတာပါ…. ပြဿနာအကြီးကြီးကြုံပြီးသေဒဏ်ပါကျသွားတယ်….ဒီလိုအခြေအနေမှာ တောကမိခင်ဖြစ်သူဟာသားလေးအမှုက ပြစ်ဒဏ်ပြေလျော့ဖို့ သူတတ်စွမ်းသလိုကြိုးစားပါတော့တယ်….
ဒီကားထဲက မခင်ဖြစ်သူအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့မင်းသမီးကြီး Hae-sook Kim ကိုတော့အားလုံးသိကြမှာပါ…သရုပ်ဆောင်အင်မတန်တော်တဲ့သူပါ….ဒီတစ်ကားလုံးလည်း သူတစ်ယောက်ထဲထိန်းသွားတာ…သားဖြစ်သူဟာ ဘယ်လိုအမှုမျိုးကျူးလွန်ခဲ့တာလဲ….မိခင်ကြီးကလည်း သားကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ ဘယ်လိုတွေကြိုးစားမလဲဆိုတာကိုတော့ခံစားကြည့်ကြပါဉီး….